मेरी आमा सधैं पूजापाठ गर्थिन् ईश्वरको भक्ति गर्थिन् । उनी प्रत्येक आइतवार पशुपतिनाथको मन्दिरमा जान्थिन् । उनी चोखीनितीमा ख्याल राख्ने, जातभात मान्ने खालकी थिइन् । जातको कुरामा त उनी सारै कट्टर थिइन्। तल्लो जातको कुनै मानिसलाई घरमा पस्न नदिने, अरुले छोएको नखाने उनको नीति थियो ।
मेरी आमा भक्तपुरकी निखुर नेवारनी थिइन् । उनी अग्ली, हट्टाकट्टा, रुपरुंग राम्रो, हेर्नमा सारै राम्री थिइन् । हामी आमाछोरा काठमाडौंमा दुई तले बिल्डिङमा बस्थ्यौं, बाबुले छोडेर गएको सम्पत्ति त्यही थियो ।
एक दिन आमाले भनिन् 'हेर्, छोरा अ ब तैंले बिहे गर्नुपर्छ । म सबै काम गर्न सक्तिनँ । मैले हाम्रै जातकी एउटी केटी हेरेकी छु, राम्री, पढेकी । अब म तेरो बिहेको कुरा चलाउँछु ।
'मैले भनें 'आमा, हेर आजसम्म मैले तिम्रो प्रत्येक कुरा पालन गर्दै आएको छु । म बिहे गर्छु, मैले केटी पनि हेरिसकेको छु । चार वर्षभयो मैले उसलाई माया गरेको । म अरुसँग बिहे गर्न सक्तिनँ ।'
मेरी आमा संसारमा नपाइने आमा थिइन् । उनको मन घिउजस्तो थियो । उनले भनिन् 'ठीक छ, तैंले केटी मन पराएको छस् भने म बाधा दिन्नँ । तर जात के हो -'
मैले आमालाई ढाँट्न सकिनँ । किनभने उनी मेरो निम्ति र्सवस्व थिइन् । मैले भने 'ऊ र्सर्किनी हो ।' आमा आगो भइन् । उनी दनदन दन्कन थालिन् 'तैंले मेरो घरमा र्सर्किनी ल्याउन खोजेको छस् ? एउटा कुरा सुनिराख् । जबसम्म म बाँच्छु मेरो घरमा तल्लो जातकी बुहारी त के, तल्लो जाततको कुनै मान्छेले खुट्टा टेक्न पाउने छैन ।' त्यसपछि मेरी आमाले रौद्ररुप धारण गरिन् ।
म चुपचाप आफ्नो कोठामा आएँ । दिन बित्दै गए । मेरो मानसिक स्थिति तपाईलाई के बताऊँ - एकातिर र्सर्किनीको प्रेम, अर्कोतिर आमाको माया । म चेप्टिएँ । आमा मेरो निम्ति र्सवस्व थिइन् । उनले मलाई बढाइन्, पढाइन्, मायाममता दिइन् । म उनको गुण यो जुनीमा कसरी तिर्न सक्छु र - उनको स्वच्छ, पवित्र मन मैले दुखाउनुहुँदैन । मेरो कर्मले उनको धर्म नष्ट हुनुहुँदैन । फेरि उता र्सर्किनीको माया । गरीबकी छोरी । उसलाई छोड्न पनि त सक्तिनँ । मेरो मुटु मसित कहाँ छ र ? मेरो मुटु त त्यही र्सर्किनीले बोकीबोकी हिँड्छे । देख्नु भो त मेरो स्थिति ?
एक दिन मेरी आमाकहाँ गएर मैले भनें 'आमा, हेर तिमीले मलाई हुर्कायौ, बढायौ, पढायौ । अहिले म यति ठूलो जागीर खाने भएँ । यो सबै त्रि्रो परिश्रम र पसिनाको फल हो । बाबु त सानैमा बिते । मेरो निम्ति तिमी नै र्सवस्व हौ । मलाई खुशी देख्न चाहन्छ्यौ भने मलाई उही उर्वशीसँग बिहे गर्ने आज्ञा देऊ । फेरिफेरि म तिम्रो मन दुखाउने काम गर्दिनँ ।'
मेरा कुराले मेरी आमा पाषाण भइन् । तर मैले भनें नि ! मेरी आमा संसारमा नपाइने आमा थिइन् । मैरै सुखशान्तिको निम्ति उनले आफ्नो जीवन अर्पेकी थिइन् । आज मेरो दुःखी रुंगरुप देखेर उनको छाती चिरियो होला । मेरो निदाउरो अनुहार, मेरो शुष्क जीवन, मेरो गतिहीन र उत्साह विहीन जिन्दगी देखेर उनको मन कति रोयो होला !
एक दिन मेरी आमाले मलाई भनिन् 'तँ त्यो आइमाईसँग त्यति सार्?हो मर्छस् भने ठीक छ त्यसैलाई बिहे गर् । तर तिमीहरु तल्लो तलामा अलग्गै बस्नू, त्यहीं पकाएर खानू । म माथि आफ्नो खाना आफैं पकाएर खान्छु । म अहिले भन्छु त्यो आइमाई मेरो कोठामा चाहिं आउन पाउँदैन ।'
मेरी आमाका कुरा सुन्दा मलाई खुशी पनि लाग्यो, दुःख पनि । मेरी आमा निकै वर आइन्, फेरि पर पनि भइन् । तर मेरी आमा पर किन हुन्थिन् ? मेरो आँखाबाट बलिन्द्र धारा छुटे अनि मैले आमालाई अँगालो मारें ।
'उता जा, सार्की ! यहाँ चेप्रे नपार्' आमाले मलाई भनिन् ।
मैले उर्वशीलाई मन्दिरमा लगेर सिन्दूर हालें । त्यहाँ न त बाजा बज्यो, नत गीत गुञ्ज्यो । न त भोजभतेर नै भयो । चुपचापसित सुनसानमा निर्जनतामा हाम्रो विवाह सम्पन्न भयो ।
आमाले आफ्नो चुला अलग गरिन् । उनी आफैं पानी ल्याउँथिन्, पकाउँथिन्, खान्थिन् । उनी बिहानबेलुकी सधैं पूजापाठ गर्थिन् । उनको नित्यकर्ममा कुनै बाधाबन्धन खडा भएन ।
समय बित्दै गयो । हाम्री छोरी दुई वर्षी भई । तर आमा न त उर्वशीसँग बोलिन् न त छोरी उर्मिलासँग । मेरो छातीको व्यथा झनै बढ्दै गयो ।
एक दिन मैले एउटा साडी किनें र आमा कहाँ गएर भनें 'हेर आमा, तिमीले बाजेबराजुको रीतिथिति मान्दै आएकीछ्यौ । त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर जात भनेको त मान्छेले बनाएको पो त ! भोलि एउटा कामी प्रधानमन्त्री भयो भने हजारौं बाहुन, छेत्री, नेवार उसलाई 'जदौ हजूर' भन्न उत्तिकै धुइरो लाग्छन् । कसैले आएर यो दमाईको खुट्टामा ढोग गर् म एक लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्यो भने हजारौं ठूला जातकाहरु उसको चरणकमलमा आफ्नो शिर राख्न तँछाड् र मछाड् गर्छन् । जात भनेको त्यस्तो हो, आमा ! तिमीसित म धेरै तर्क गर्न चाहन्नँ । भोलि उर्वशीको जन्मदिन हो । उसलाई यो साडी देऊ र बुहारी भनेर बोलाऊ । त्यही नै मेरो जीवनको सबभन्दा खुशीको दिन हुनेछ ।'
'यो साडी उता लैजा ।' आमाले कठोर स्वरमा भनिन् । आमाको हाउभाउले मेरो मन दुखिरहेको थियो । यो कस्तो घर हो - एउटै छानामुनि बसेर पनि हामी विभाजित छौं । घर त सिंगो हुनुपर्छ नि ! अविभाजित, अबिभक्त र अखण्डित ।
आज उर्वशीको जन्मदिन । बिहानको आठ बजेको थियो । आमाले मलाई एक्कासि डाकेर भनिन् 'त्यसलाई तयार हुनु भन् म पशुपतिनाथको मन्दिरमा लैजान्छु ।'
म हर्षे उन्मादित भएँ । म उन्मत्त भएँ । दौडेर गई मैले उर्वशीलाई भनें 'तिमी झट्ट तयार होऊ ! आमासँग पशुपतिनाथ जानुपर्छ । नीलो साडी र नीलो ब्लाउज लाउनू है ।' त्यति भनेर म ट्याक्सी लिन गएँ । फर्केर आउँदा उर्वशी झलमल्ल परीजस्ती भएकी थिई । उसको नाम पनि उर्वशी, मान्छे पनि उर्वशीजस्ती देखिई । नीलो साडी लाएकी, लामो मिलेको नाक, उज्याला चम्किला आँखा, रंग चढेका गाला, गालामा एउटा सानो कोठी, हिस्सी परेको अनुहार, देवकोटाले भनेजस्तो घिउघिउ गनाउने, म त उर्वशीलाई हेरेको हेरेकै भएछु । र्सर्किनी त र्सर्किनी कति राम्री र्सर्किनी ! मोरीले मलाई मस्त पारी ।
आमा र उर्वशी ट्याक्सीमा चढेर पशुपति गए । म छोरीसित खेल्न थालें । मैले छोरीलाई भनें 'हेर् छोरी, हामी सबै नेपाली । जातले मान्छे ठूलो र सानो कहाँ हुन्छ र ? हामी धनी र गरीब पो छौं त । ठूलो र सानो छैनौं नि !' त्यसबेला मेरी दुई वर्षीय छोरीले के भनी तपाईंलाई थाहा छ ? उसले भनी 'म पिपलमेन्ट खान्छु ।'
हे मानव ! तँ किन ठूलो हुन्छस् - किन बढ्छस् ? किन तेरो बुद्धिको बिर्को उघ्रिन्छ - किन तँ बालककै बुद्धि लिएर बाँच्न सक्तैनस् ?
दुई घण्टापछि आमा र उर्वशी घर आए । आमाको अनुहारमा शान्त भाव थियो । त्यति बेला उनको जीउ हल्का फुल्का थियो, ठूला बोझ कहीं बिसाएर आए जस्तो । उनी सरासर आफ्नो कोठामा गइन् । र्सर्किनीचाहिँ र्सर्केर उसैउसै थिई । मैले उसलाई के भयो भनेर सोधें । उर्वशीले भनी 'आमाले मन्दिरको अघि उभिएर मेरो शिरमा हात राखेर भनिन् 'हे भगवान् ! यो र्सर्किनीलाई आजदेखि बुहारी भनेर ग्रहण गर्दैछु । मैले छोराको सुखलाई सबैभन्दा ठूलो सुख ठानेकी छु । मैले कुनै पाप गरेकी छु भने अबला ठानी मलाई माफ गर्नुहोला । त्यसपछि नयाँ सडकमा लगेर उनले मलाई दुईवटा साडी किनिदिइन् र भनिन् बुहारी, तेरो जन्मदिनमा यो मेरो उपहार !' यति भन्दाभन्दै उवशी भकानो फुटाएर रुन थाली । मैले उसलाई अँगालोमा बाँधे । मेरो आँखाबाट पनि बलिन्द्र धारा छुटे । निकै बेर हामी लोग्नेस्वास्नी त्यसरी नै रोइरह्यौं ।
भोलिपल्टदेखि हाम्रो भान्सा एउटै भयो । उर्वशीले खाना पकाई । आमाले पनि खाना खाइन् । एक दिन आमाले भनिन् 'बुहारीले तरकारी त मीठो पकाउँछे । तर खुरसानी चाहिँ कम्ती हाल्नू है !'
राजनारायण प्रधानको परिचय
१९९२ साल पुस २ गते, कोलकाता, भारत
एमकम, कलकत्ता विश्वविद्यालय
जम्मा ६३ वटा पुस्तक
(बालसाहित्य र पाठ्यपुस्तक ५० वटासमेत)
• वीरेन्द्र इन्टर कलेज, तेह्रथुम आठराईको संस्थापक प्रिन्सिपल
• सेन्ट जोसेफ कलेज दार्जिलिङको प्राध्यापक
• पश्चिमबङ्गाल भारतका विभिन्न साँस्कृतिक संस्थामा आबद्ध
२०७२ साल मङ्सिर २ गते दार्जिलिङ, भारत